2. ကျွန်တော်နှင့် ဗိုက်ရွဲရဲများ (သိုမဟုတ်) Passport လုပ်ချင်း
Software Engineer focused on Android. Really passionate about programming and experimenting with new things
ကျွန်တော်နှင့် ဗိုက်ရွဲရဲများ (သိုမဟုတ်) Passport လုပ်ချင်း
ဒီနေ့က ၃လပိုင်း ၃၀ ရက်နေ့ ဘန်ကောက်ကို သွားမယ်လို စိတ်ကူးထားတာက ၄ လပိုင်းအကုန်လောက်။ တစ်ခုပြောရအုန်းမယ် သွားမယ်လိုဆုံးဖြတ်ပီး ရင် ပါးစပ်က အငြိမ်အမနေပါနဲ တော့ ခရီးစဥ်နဲပတ်သတ်သမျှ သိသမျှကို သာလိုက်မေးပေတော့။ သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချပါ။ အဲ့တော့ အရင်ဆုံး
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (passport)လုပ်ရပါမယ်။ ကျွန်တော်မှာက အသိအကူအညီ နဲ လုပ်ရမယ် နေရာ စာရွက်စာတမ်(အိမ်ထောင်စု ဇယား ကော်ပီ၊ မူရင်း၊ မှတ်ပုံတင် ကော်ပီ၊ မူရင်း) စျေနူန်း ၄သောင်းကိုပါသိလိုက်ရတယ်။ (မှတ်ချက်။ passport ပုံလုံး၀ မရိုက်သွားပါနဲ သူတို့စီမှာ ရိုက်ရတာမလို့ပါ)။ တိုက်နိုင်သမျှတော့
အစိုးရရုံးကိစ္စတွေနဲ ကင်းအောင် ရှောင်ပါတယ်။ (သူတို့လုပ်ပုံကိုင်းပုံကို လုံး၀ သည်းမခံနိုင်လို့ပါ) အခုကတော့မတက်နိုင်ဖူးလေ ပက်သတ်ရတော့မှာပေါ့။ ရုံရှေ့မှာတော့ လူတွေ အုံနေတာပဲ ရုံးထဲကို ၀င်မယ်ဆိုရင် မှတ်ပုံတင်ပြ ရတယ်။ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရတယ်။ ထုံးစံအရတော့ ၀င်တဲ့လူတိုင်း အဲလို လုပ်ရတယ်။ အခုဟာက ဟိတ်နဲဟန် နဲ ၀င်သွားတဲ့သူကို ကျတော့မစစ်တော့ ပဲ။ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စလောက်ပဲ (ဟန်ပြ) လုပ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ (ဒါက လည်းပြသနာမဟုတ်သေးပါဖူးလေ) ပြသနာက အခုမှ စတာ အထဲ၀င်သွာတော့ ရဲတစ်ယောက်(ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်) passportက လုပ်ခ ၄သောင်းအပြင် ဒဏ်ကြေး ၂သောင်း လ.၀.က ထပ်စောင်းပေးဦးမယ်ဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မှတ်ပုံတင်က ၁၈ပြည့်မလှဲ ရသေးလို့တဲ့။ (ကျွန်တော် အခု အသက် ၂၀ ကျော်ပါပီ ၁၈နှစ်ပြည့်ပီတည်းက မှတ်ပုံတင် လဲဖို့အတွက် ရပ်ကွက် ရုံမှာ ပုံစံလည်း တင်ပီးသားပါ ဒီနေ့ထိဘာလို့မလဲပေးတာလဲဆိုတာ စာဖတ်ပရိသတ်ကိုနားလည်အောင် မရှင်းပြတတ်ဖူး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း နားမလည်ဖူး) အဲ့တော့ အနာပေါ်ဒုတ်ကျဖြတ်သွားတာပေါ့ ကိုယ် ၁၈ ပြည့်လဲဖို့ မကြိုစားခဲ့ဖူးဆို ပျော်ပျော်ကြီးပေးပါတယ်ဗျာ။ အခုတော့ ကိုက ကြိုးစားခဲ့တယ် သူတို(လ.၀.က) မလဲပေးပဲ သူတို့ ကဒဏ်ကြေးပြန်ကောက်တယ်ဆိုတော့ စိတ်တိုတာပေါ့။ ကျွန်တော် ကလည်း ကျွန်တော်ကြိးစားထားအကြာင်းကို ပြောတော့ ဗိုက်ရွဲ ရဲတွေက လ.၀.က ချင်းမတူကြောင်းလားပြောတယ်။(တာ၀န်ယူမူကင်းမဲပုံများ) ဟာသတွေဗျာ မြန်မာပြည်မှာ လ.၀.က တစ်ခုတည်းရှိတာပါ။ ပိုက်ဆံယူကောင်း အောင်ရွီး ပြောနေတာ။ ကျွန်တော် ပိုက်ဆံမပေးရင် ဆက်မလုပ်ပေးမယ့်ပုံဖြစ်နေတာ့ ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရတယ်။ ပိုက်ဆံလည်းပေးလိုက်တော့ အစိုးရရုံးတွေအတိုင်း ချိတ်ခုပီး တစ်ခုခေါ်သွားတယ်။ passport ပုံရိုက်တယ်။ပီးတော့ ၀င်းထဲမှာရှိတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်(ဟန်ပြ) ခေါ်သွား ပုံစံ(form)ဖြည့်ဖို့။ စားပွဲမှာလူတွေအုံးနေတာပဲ အလည်မှာတော့ form ဖြည့်ပေးမယ် မိန်းမတစ်ယောက်။ ကျွန်တော်အတွက် form ကို သူပဲ ဖြည့်ပေးတယ် ကျွန်တော်နာမည် ကို တော့ သူစာရွက်မှာ မှတ်လိုက်တယ်( ဖြည့်ပေးတဲ့လူ အရေအတွက်အတိုင်းပိုက်ဆံရတယ်နေမှာ) form ဖြည့်ပီးတာနဲ form သွားတင်ရတယ်။ လက်မှတ်ထိုး ဘာ ညာ နဲ နေ့တပိုင်းကုန်းသွားတည် နောက်ဆုံး ၁၀ ရက်နေရင်လာထုတ်ဖို့ ချလံပေးလိုက်တယ်။ အဲ့ဒါနဲပဲ passport ကိစ္စ ပီးသွားတော့တယ်။ မြန်မာပြည် ခေတ်ပြောင်းနေပေမဲ့လည်း မပြောင်းလဲတဲ့မျိုးဆက်နေတွကျန်နေသေးပါလား…..
Never missastory from Banner LMA, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Banner LMA